River/lake cross delivery | foodpanda riders MM
panda rider များရဲ့ နေ့စဉ်ပို့ဆောင်မှု့များတွင် မြစ်/ ချောင်း / ကန်နှင့် တံတားများဖြတ်ကျော်၍ ပို့ဆောင်ရမည့် အော်ဒါများနှင့်ပတ်သက်ပြီး လုပ်အားခတွက်ချက်ပေးမှုတွင် ပို့ဆောင်ရသည့်အကွာအဝေးနှင့် အမှန်တကယ် ပို့ဆောင်ရသည့်အကွာအဝေးကွာဟချက်အချို့ကြောင့် panda riderတို့ အဆင်မပြေမှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်ကို ကြားသိရပါသည်။
ထို့ကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်၊ အင်းယားကန်၊ မဟာဗန္ဓုလတံတား၊ ဂျပန်တံတား (or) သာကေတတံတားအသစ်၊ သစ္စာလမ်းတံတားနှင့် ငမိုးရိပ်တံတား ဖြတ်သန်းပို့ဆောင်ခဲ့ရသည့် ပို့ဆောင်မှုများအတွက် အော်ဒါဝင်လာသည့်စာမျက်နှာတွင် တွေ့မြင်ရသည့် အော်ဒါပို့ဆောင်ခအပြင်
ထပ်ဆောင်းအနေဖြင့် ၂၀၂၂ မေလ(၁၆)ရက်မှစတင်ပြီး ပြင်ဆင်တွက်ချက်၍ အော်ဒါပို့ဆောင်ခကိုထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြင်ဆင်တွက်ချက်မှုအား စမ်းသပ်ကာလအနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ panda rider များထံမှ အများဆုံးကြားသိရသည့်နေရာများကို အဓိကထား
တွက်ချက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အခြားကျန်ရှိသော မြို့များအတွက်လည်း မကြာမှီတိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြင်ဆင်တွက်ချက်ပေးသည့်ငွေအား အော်ဒါဝင်လာသည့်စာမျက်နှာတွင် တွေ့မြင်ရသည့် အော်ဒါပို့ဆောင်ခနှင့် အတူပူးတွဲမြင်ရမှာလား?
ဖော်ပြပါနေရာများအား ဖြတ်ကျော်ပို့ဆောင်ရသည့် အော်ဒါများအတွက် ပို့ဆောင်မှု့ပြီး မြောက်သည့် အခါမှ ပြန်လည် ပြင်ဆင်တွက်ချက်ပေးရသောကြောင့် အော်ဒါဝင်လာသည့်စာမျက်နှာတွင် ကြိုတင်တွေ့မြင်ရသည့် အော်ဒါပို့ဆောင်ခနှင့်အတူ ပူးတွဲမြင်တွေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ပြင်ဆင်တွက်ချက်ပေးမှုအတွက် ပို့ဆောင်သူဘက်မှ ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သလဲ?
ပို့ဆောင်သူဘက်မှ ဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုပဲ foodpanda ရုံးဘက်မှ ပြင်ဆင်တွက်ချက်ထည့်သွင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
ပြင်ဆင်တွက်ချက်ပေးထားသည့်ငွေအား မည့်သည့်နေရာတွင် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသလဲ?
ပို့ဆောင်ရေးအက်ပ် > Menu bar > Payment အတွင်းမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်အလိုက် ရွေးချယ်ပြီး ‘’Adjustment’’ (ပြင်ဆင်တွက်ချက်ပေးမှု) နေရာမှာ စုစုပေါင်းပြင်ဆင်တွက်ချက်ပေးမှုကို ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
ပို့ဆောင်ရေးအက်ပ် > Menu bar > Inbox အပတ်စဉ်(သောကြာနေ့တိုင်း)ရရှိသည့် လုပ်အားခရရှိမှုပြေစာ ‘’လုပ်အားခ ပြင်ဆင်တွက်ချက်ပေးမှုများ’’ တွင် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
လုပ်အားခပြင်ဆင်တွက်ချက်ပေးမှုတွင် မြစ်/ကန်/တံတားဖြတ်ကျော် ပို့ဆောင်ရသည့် အော်ဒါတိုင်းအတွက် ပြင်ဆင်တွက်ချက်ပေးပါသလား?
လတ်တလော စမ်းသပ်ကာလအနေနဲ့ ပြင်ဆင်တွက်ချက်ပေးသွားမှာဖြစ်သောကြောင့် panda rider တို့ထံမှ ကြားသိရသည့် ရန်ကုန်မြို့ရှိဖော်ပြပါနေရာများအတွက် အဓိကထားတွက်ချက်ပေးသွားပါမည်။ ဆက်လက်ပြီးလည်း panda rider တို့ထံမှ ကြားသိရသည့်ထပ်တိုးနေရာများနှင့် အခြားမြို့များအတွက် တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပထမအပတ်တွင် ဖြတ်ကျော်ပို့ဆောင်ထားသည့် အော်ဒါများရှိပါက ထိုအော်ဒါများအတွက် ပြင်ဆင်တွက်ချက်ပေးထားသည့်ငွေအား ဒုတိယအပတ်၏ အပတ်စဉ်လုပ်အားခရရှိနေကျ (သောကြာနေ့)တွင် လက်ခံရရှိပါမည်။ ဥပမာ - CW-20 (၁၆.၀၅.၂၀၂၂ မှ ၂၂.၀၅.၂၀၂၂) တွင် ပို့ဆောင်ထားမှုများရှိပါက
ပြင်ဆင်တွက်ချက်ပေးထားသည့်ငွေကို လာမည့် CW-21 ၏(သောကြာနေ့) လုပ်အားခရရှိသည့်နေ့တွင် လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဖြတ်ကျော်ပို့ဆောင်မှုများနှင့် လိပ်စာမှားယွင်းခြင်းအတွက် ထပ်ဆောင်း